Manchester City iyo Liverpool way burburin karaan - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Manchester City iyo Liverpool ayaa laga yaabaa inay niyad jabiyaan
Manchester City iyo Liverpool ayaa laga yaabaa inay niyad jabiyaan
Ian Darke Tifatiraha ESPN.com
Darke, oo ugu yeeray cayaaraha shabakadaha Koobkii Kubadda Cagta Koonfur Afrika 2010, waa codka kubada cagta ESPN ee Mareykanka. Waxay daboolaysaa Barclays Premier League iyo Champions League tan iyo 1982 waxayna leedahay mid ka mid ah codadka ugu caansan kubada cagta adduunka.
Manchester City ayaa qaaday rikoorkiisii ​​rikoorka ahaa ee aan laga badinin, waxaana ay ku guuleystaan ​​markii seddexaad oo isku xigta oo Premier League ah oo ay ku qaadaan Norwich sabtida.
Si la yaab leh, waxaa lagu qabtay isku aadka 0-0 ee Carrow Road intii lagu jiray labadii booqasho ee ugu dambeysay horyaalka. Taajir ayaad kuheli laheyd adoo dul dhigaaya lacag soo celinta dhibcahaas waqtigan.
Canaries-ka cusub ee la dalacsiiyay, oo ah koox geesinimo leh, ayaa laga soo xigtay 20-1 by buugaagta buugaagta si ay ugu guuleystaan ​​usbuucan waana qiimeyn macquul ah oo ku saabsan fursadooda. la siiyay weerarka wax dilaya ee Magaalada iyo difaaca gaarka ah iyo kuwa aan khibradda u lahayn.
Ma jiraan wax aan soo aragnay oo muujinaya in koox kasta oo aan ka aheyn Liverpool inay sii wadi karto la qabsiga Pep Guardiola. 2-2-kii ugu dambeeyay barbaro dhex maray Arsenal iyo Spurs, iyadoo xiiso leh, waxay iftiimisay daciifnimada labada koox. Chelsea waa fududahay in la daawado, laakiin shaki ayaa laga qabaa dhanka daafaca, Manchester United ayaa umuuqata inaysan heysan hal abuurka 10 ee hal abuurka leh iyo gooldhalinta goos goos ah.
- Dhibcaha fursadaha 2019: Magaalo aan nasiib xumo ahayn, miyaay ka liitaa tii lixaad? 19659010] - Ogden: Solskjaer, Poch ka mid ah howl wadeenada soo food saaray cadaadiska ugu adag
Laakiin miyay jiri karaan hal walwal oo walwal ku haya City? Dhaawaca xun ee jilibka xun ee Aymeric Laporte kaasoo ka xayuubin doona daafaca dhexe ee ugu horreeya muddo afar bilood ah, wuxuu xadidayaa xulashooyinka aag muhiim ah. Wuu baxayaa John Stones et Nicolas Otamendi haysashada qalcadda oo midkoodna xulasho otomaatig ah looma samayn sanadkii hore; Dhagxaanta ayaa ciyaaray 24 waxaana Otamendi ka soo muuqday kaliya kulamada horyaalka ee 18 38. Tirakoobyadan ayaa soo jeedinaya in Guardiola uusan kalsooni buuxda ku qabin isaga, laakiin ay tahay inuu noo sheego inuu isagu hibeeyey labada shaqo.
Taageerayaasha magaaladu waa inay jeclaan lahayeen inay marwalba helaan hoggaamiyeheena dhiirrigeliya Vincent Kompany u hadhay Anderlecht. Eric Garcia, waa qof da 'yar oo karti badan leh laakiin aan la dafirin, ama, ay u badan tahay inuu gadaal ka riixo qadka dhexe ee daafaca Fernandinho dhanka difaaca. Xitaa daafaca bidix Oleksandr Zinchenko dheel dheel dheel dheelitir leh ayaa ka ciyaari kara kor u qaadis.
Dhaawaca Aymeric Laporte ayaa cadeyn kara muhimka waxa tartan adag ku noqon kara Premier League. Sawirka Nick Potts / PA Sawirro iyada oo loo marayo Getty Images
Laakiin tani maahan xaalad ku habboon koox ay u badan tahay in la siiyo dhib yar oo ay helaan koox Liverpool ah oo laga badiyay kaliya hal xilli ciyaareedkii hore.
Xaqiiqdii ku hay farahiisa inay u gudbaan dhaawac dambe ee aaggan. Kadib tilmaanta dhibaatadan, waxay aad ugu dhowdahay in xitaa hadii City laga dhaliyo goolal dheeri ah Laporte, wali waxay dhalin doonaan goolal ku filan dhamaadka kale si ay u sii wadaan guusha.
Isla mar ahaantaana, Liverpool waxay sameysay bilow ah 100 waxayna muujisay calaamadaha garaacista xitaa xawaare aad u sareeya. Dhibaatada labaad ee Sadio Mane Burnley waxay ahayd, si kastaba ha noqotee, la yaab. Wuxuu umuuqday inuu ka xanaaqay diidmada Mohamed salah inuu meel dhigo inta uu ku fiicnaa inuu goolal dhaliyo.
Dhacdadani miyuu ahaa duufaan koob shaah ah, xiisad yar oo hal abuur leh oo udhaxeysa ciyaartoy faraxsan? Mise waxay calaamad u ahayd xiriirka ka dhexeeya labadan weeraryahan ee aadka u wanaagsan inuu yahay mid xiisad yar? Dabcan, Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku adkaysanaya in wax walba “qabow yihiin” in la isticmaalo ereyga uu jecel yahay.
Sikastaba, ma aha inay ahaato mid daran. Markii Manchester United ay ku guuleysatay Treble 20 sano ka hor, kuwii weerarka soo qaaday Teddy Sheringham iyo Andy Cole waligood si sahlan ugama kulmin . Ma jiraan wax qandaraasyada ciyaartooyda ku jira oo sheegaya inay tahay inay is jeclaadaan. Laakiin way caawinaysaa iyaga.
Xaqiiqdii, waxaan halis ugu jirnaa inaan helno ciladado labo kooxood oo raadinaya cinwaanka marka aysan jirin.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/3939810/could-anything-derail-manchester-city-and-liverpools-premier-league-title-bids
Cagta OL - OL: Sylvinho ma uusan xanaaqin xanaaqiisa, Dembélé ayaa qaatay digniin - Olympique Lyonnais - FOOT 01
PSG - PSG: Messi wuxuu shaki gelinayaa Barcelona inay ku jirto Neymar - FOOT 01
Hindiya: Go'aanka Babri: Sec 144 wuxuu ku xayiran yahay Ayodhya illaa 10 Diseembar | Wararka Hindiya